Sida loo soo tuurid drive si ammaan ah | BLOG OS-DUKAANKA
December 26, 2018 ecommerce Computer, Electronics, OS-DUKAANKA, Taageerada OSGEAR, Products, kaydinta, Technology 0
Maxaa la sameeyaa haddii aad ka heli CD ama DVD xayiran drive indhaha aad computer iyo ma soo tuurid doonaa? Waxaad qaadan kartaa dhowr tallaabo in dhibta DVD ku dhegto ama CD
Computers yihiin waxa ay yihiin, adag. taasoo la micno ah, DVD ah ku xayiran noqon kartaa mid ka mid ah waxyaabaha suurto gal dhowr. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in ay fududahay in la xaliyo. Mararka qaar, ma fududa. Waxa ugu fiican in la sameeyo waa dhibta dhibaatada.
Maxay waa in aadan samayn: Dheji kaashawiito ah, mindida jeebka, credit card, ama wax kale oo kasta gelin DVD drive oo isku day uu u dhigmo u furan ama jiid saxaarad disc ka soo baxay. Marka walax aanu xaq uma shaqeeyo, Waxaan dareemayaa sida ay wadatey my computer guud ahaan qolka kaliya sida ugu badan nin ee soo socda. Laakiin kaliya ma samayn. marka hore dhibta.
Joogu u soo tuurid CD computer aad / saxaarad drive DVD >>>
Waxaa jiri doona waqtiyo aad u baahan tahay in la furo saxaarad on kombiyuutarada aad CD / DVD drive marka nidaamka la shaqeeya off.
Waxaad u baahan tahay in ay kabaha aad computer la isticmaalayo CD ah / DVD drive
Waxaad u baahan tahay in ay dib u soo ceshano disk oo aan bilaabo ilaa computer ka
digniin: Dami awood u leeyahay nidaamka ka hor gacanta maahan kuwo disk ah.
All CD / drives DVD leedahay soo tuurid Pin Hole.
Si tartiib ah gelin clip modified warqad galay Pin soo tuurid ka Hole ilaa aad dareentid in ay xidhiidh la sameeyaan marsho sudheen saxaarad. Si adag u riixaya uurkooda, waxaad arki doontaa saxaarad in ay bilaabaan in ay ka guurto. Press uurkooda ilaa aad meel kugu filan si aad u hesho farta hoos saxaarad ka dibna u soo baxdo inta kale ee jidka. Haddii aad ka heli kartaa qayb yar oo saxaarad baxay, waxaad isticmaali kartaa darafka kale clip warqad si tartiib ah pry furo saxaarad ku filan si aad u hesho fartaada ee iyada ka hooseeyey. Marka sameeyey, si tartiib ah dib u riixdo saxaarad in booska u xiran yihiin. Waxay si adag u xir doonaa marka nidaamka la shaqeeya.
Laptop indhaha Disk Drive:
Geli paperclip galay pinhole oo si tartiib ah riix. Saar iyo dakhso paperclip inta loo baahan yahay in soo tuurid bay drive ku filan in ay la wareegaan qabsaday ah waxaa ka mid ah.
Si tartiib ah on bay drive ilaa uu si buuxda uga soo laabatay. Iska ilaali in ay sii wadaan si ay u soo jiid haddii aad dareentid wax iska caabin ah. Riix badhanka soo tuurid mar kale in ay xirto saxaarad. (Desktops oo kaliya)
Joogu u soo tuurid disc gudahood System BIOS >>>
Si fiican go'doomiyo haddii arrinta waxaa keena drive laftiisa ama qaar ka mid ah codsiga xisbiga 3rd oo laga yaabee in aay arrinta, waxaad isku dayi kartaa in ay soo tuurid saxaarad gudaha ka BIOS Nidaamka. Si aad u soo tuurid saxaarad gudahood BIOS Nidaamka, raac talaabooyinkan:
Guuleysatey aad computer iyo taabo muhiimka ah F2 ee inta la howleheedii.
Marka aad ku sugan tahay screen SystemBIOS ah, riix badhanka soo tuurid ee CD / DVD / Blu-ray drive. Wixii tilmaamaha on meesha laga helo button soo tuurid ka on your computer.
Haddii soo tuurid saxaarad waa guul gudahood BIOS Nidaamka, guuleysatey computer ka iyo boot galay nidaamka qalliinka.
In Windows 7 / Vista / XP / 2000, fadlan raac tilmaamaha kuwan >>>
Xuquuqda-riix (My) Computer.
Manager Device Select.
Kaxeeya digsi Open.
Double-click on tirada model drive adag ee.
Tag tab ee Siyaasadaha.
Hubi in drive ayaa lagu wadaa in Tayadoodii for saarista Quick.
Haddii ay sidaas tahay, drive adag uma baahna in la Ammaan saaray gacanta ka nidaamka. Just dami drive adag ama barkinta ee laguugu sahlo markasta oo drive adag ma aha mashquul xogta wareejinta.
Sidaas waxaa jira fursad ah caato ah in Risaalo la khilaafo doonaa by saarista a. Taas waxay keenaysaa ma halis u hardware drive, laakiin waxa ay xogta aanu khatar gelin karta yar.
Fadlan xusuusnow in aad noqon lahayd mid aad u soconina in aad naftaada ku riday xaalad in walaac aad for. Haddii drive this ahaayeen in ay la kulmaan failure kadis ah si farsamaysan ama elektaroonik ah ama haddii ay dhacaan, ama haddii Risaalo drive ee waa in ay noqdaan kharribeen, xogta aad la waayi laheyn iyo soo kabashada xogta waa mid aad u qaali ah. Xusuusnow in tani ay tahay drive a gurmad, oo gurmad ah waxaa lagu qeexaa sida “nuqulka labaad ee xogta warbaahinta ah kaydinta labaad”.
Haddii on labaad a drive dibadda adag, CD ama DVD, ah drive adag gudaha, a drive network adag, ama cajalad, nuqul 2aad ee xogta maanta oo xajiya.
Hel Macluumaad dheeraad ah, Riix Halkan
soo tuurid drive
Tababaraha qalab taageero darawalka 64-Windows yara Intel Taageerada Driver Taxanaha HTC processor Ujeeddo Dadweynaha Technology Processor Nokia Samsung processor Technology_Internet Model Device Telefoonka gacanta OS-DUKAANKA fasiraad sharci ah Software Graphics HD
Tababaraha qalab processor fasiraad sharci ah OS-DUKAANKA processor Sony Ericsson 64-Windows yara Ujeeddo Dadweynaha Qualcomm Processor Graphics HD Software Nokia Samsung Galaxy Model Device casriga ah Technology_Internet Intel HTC Taageerada Driver Taxanaha taageero darawalka Technology Telefoonka gacanta Server Intel Samsung